သင်ဒီမှာပါ: Home / န်ဆောင်မှုများ၏စည်းမျဉ်းများ
အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်အားဝင်ရောက်သို့မဟုတ်အသုံးမပြုခင်ကဒီသဘောတူညီချက်ကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။ Web Site ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအားဝင်ရောက်သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ဤသဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ဖြစ်လာသဘောတူသည်။ သင်ဤသဘောတူညီချက်အပေါငျးတို့သစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများသဘောမတူဘူးလျှင်, သင်ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုဝင်ရောက်သို့မဟုတ်မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမသုံးနိုငျသညျ။ ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုအဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကကမ်းလှမ်းမှုကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, လက်ခံမှုဖော်ပြသည်ဤဝေါဟာရများကိုကန့်သတ်ထားသည်။ အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်မှသာကအနည်းဆုံး 13 နှစ်ရှိပြီနေသောတစ်ဦးချင်းစီမှရရှိနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့အ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းအကောင့်များနှင့်ဆိုက်။ သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဘလော့ဂ် / site ကိုဖန်တီးခဲ့လျှင်, သင်သည်သင်၏အကောင့်များနှင့်ဘလော့ဂ်၏လုံခြုံရေးထိန်းသိမ်းတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင် account တစ်ခုအောက်မှာဖြစ်ပေါ်သမျှသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဘလော့ဂ်နှင့် ဆက်စပ်. ခေါ်ဆောင်သွားအခြားလုပ်ဆောင်ချက်များများအတွက်အပြည့်အဝတာဝန်ရှိသည်။ သငျသညျကိုဖော်ပြရန်သို့မဟုတ် assign သော့ချက်စာလုံးများသင့်ရဲ့ Blog ကိုတစ်ဦးအထင်မြင်မှားစေသောသို့မဟုတ်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောထုံးစံ၌, တခြားသူတွေရဲ့အမည်သို့မဟုတ်ဂုဏ်သတင်းအပေါ်ကုန်သွယ်မှုရည်ရွယ်တစ်ဦးထုံးစံ၌အပါအဝင်နှင့် The Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ပါကမသင့်လျော်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆကြောင်းမည်သည့်ဖော်ပြချက်သို့မဟုတ်သော့ချက်စာလုံးသို့မဟုတ်စခွေငျးငှါမပြုရ ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သော, ဒါမှမဟုတ်အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းတာဝန်ယူမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့မဟုတ်ရင်ဖွယ်ရှိ။ သငျသညျခကျြခငျြးအဆိုပါ Planet ကို Fixer သင့်ရဲ့ Blog ကိုမဆိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုမှု၏ Digest မဂ္ဂဇင်း, သင့်အကောင့်သို့မဟုတ်လုံခြုံရေးအခြားမည်သည့်ပြိုပျက်ရာကိုလည်းအကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်၏ရလဒ်အဖြစ်မြှုတ်ကိုမဆိုမျိုးကိုမဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအပါအဝင်သင်ဟာနေဖြင့်မည်သည့်လုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်များအတွက်ထိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
မျှဝေသူများ၏တာဝန်။ သငျသညျဘလော့ဂ်သည်ကျဘျဆိုကျဖို့ဘလော့ဂ်, post ကိုပစ္စည်းအပေါ်မှတ်ချက်, အဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် post ကိုလင့်များ, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်လည်ပတ်လိုလျှင်အောင် (သို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယပါတီလုပ်ခွင့်ပြုပါ) ပစ္စည်းရရှိနိုင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖွငျ့ (မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်း, "အကြောင်းအရာ" ), သငျသညျများ၏ content နှင့်အကြောင်းအရာကနေရရှိလာတဲ့မဆိုထိခိုက်မှုများအတွက်လုံးဝတာဝန်ရှိသည်။ ဒါကမသက်ဆိုင်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်အကြောင်းအရာစာသား, ဂရပ်ဖစ်တစ်ဦးအသံဖိုင်, ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲကိုဖွဲ့စည်းသည်ဖြစ်စေ၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာမရရှိနိုင်ပါအောင်အားဖြင့်, သင်သည်ကိုယ်စားပြုအကြောင်းခိုင်လုံ:
အဆိုပါအကြောင်းအရာများဒေါင်းလုတ်ဆွဲ, ကူးယူနှင့်အသုံးပြုခြင်းဆိုတတိယပါတီများ၏မူပိုင်ခွင့်, မူပိုင်ခွင့်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်အခွင့်အရေး, ကန့်သတ်ထားအပါအဝင်ပေမယ့်မစီးပွားဖြစ်အခွင့်အရေး, နှင့်ငြိစွန်းမည်မဟုတ်;
သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်သင်ဖန်တီးဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဖို့အခွင့်အရေးများရှိပါတယ်လျှင်, သင်တစ်ခုခုကို (ဈ) ကိုအကြောင်းအရာ post သို့မဟုတ်မရရှိနိုင်စေရန်သင့်အလုပ်ရှင်ထံမှခွင့်ပြုချက်မဆို software ကိုကန့်သတ်ထားအပါအဝင်ပေမယ့်ကျမခံဘဲ, သို့မဟုတ် (ii) သင့်အလုပ်ရှင်မှအဖြစ်စွန့်လွှတ်လုံခြုံပါပြီ အဆိုပါအကြောင်းအရာဒါမှမဟုတ်အားလုံးကိုအခွင့်အရေးများ;
သငျသညျအပြည့်အဝအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းဆို Third-party လိုင်စင်နှင့်အတူလိုက်နာကြခြင်းနှင့်အောင်မြင်စွာအသုံးပြုသူများသည်မည်သည့်လိုအပ်သည့်ဝေါဟာရများကိုအဆုံးသတ်ရှောက်သွားလိုအပ်သောခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပြုမိပါပြီ;
အဆိုပါအကြောင်းအရာကိုမဆိုဗိုင်းရပ်စ်, worm, malware များ, Trojan ဟာမြင်းများသို့မဟုတ်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အဖျက်အကြောင်းအရာဆံ့သို့မဟုတ် install လုပ်မထားဘူး,
machine- သို့မဟုတ်ကျပန်း-generated နှင့်တတိယပါတီက်ဘ်ဆိုက်များမှအသွားအလာကိုမောင်းသို့မဟုတ်တတိယပါတီက်ဘ်ဆိုက်များ၏ search engine ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ဒီဇိုင်းသိက္ခာမဲ့သို့မဟုတ်မလိုချင်တဲ့စီးပွားဖြစ်အကြောင်းအရာဆံ့မခံပါဘူးမဟုတ်ပါ, spam များကိုမဟုတ်ပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်များဖို့အကြောင်းအရာ (ထိုကဲ့သို့သော phishing အဖြစ်) သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောလှည့်စားမှုအဖြစ်ပစ္စည်း () ၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်လက်ခံသူများလှည့်ဖြား;
အဆိုပါအကြောင်းအရာညစ်ညမ်းမဟုတ်ပါ, ခြိမ်းခြောက်မှုများဆံ့သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများဆီသို့ဦးတည်အကြမ်းဖက်မှုများလှုံ့ဆော်ခြင်း, မည်သည့်တတိယပါတီတွေရဲ့ privacy သို့မဟုတ်လူသိရှင်ကြားအခွင့်အရေးများချိုးဖောက်ပါဘူးပါဘူး;
သင့်ရဲ့ Blog ကိုထိုကဲ့သို့သောသတင်းအဖွဲ့အစည်းများ, အီးမေးလ်စာရင်းများ, အခြားဘလော့ဂ်များနဲ့ web site များနှင့်ဆင်တူမလိုလားသောမြှင့်တင်ရေးနည်းလမ်းများအပေါ် spam များကိုလင့်များအဖြစ်မလိုချင်တဲ့အီလက်ထရောနစ်မက်ဆေ့ခ်ျများမှတဆင့်ကြော်ငြာတဲ့မမူ
သင့်ရဲ့ Blog ကိုသင်သည်အခြားလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားသင့်စာဖတ်သူများလှည့်ဖြားစေတဲ့ထုံးစံ၌အမည်ရှိသည်မဟုတ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင့်ဘလော့ဂ်ရဲ့ URL သို့မဟုတ်အမည်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထက်အခြားကုမ္ပဏီထက်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အမည်ကိုမျှမက, နှင့်
သငျသညျမဟုတ်ရင်အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းသို့မဟုတ်ခြင်းဖြင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့မေတ္တာရပ်ခံရှိမရှိ, ကွန်ပျူတာကုဒ်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာ၏အမှု၌ရှိသည်တိကျစွာခွဲခြားနှင့် / သို့မဟုတ်အမျိုးအစားကိုဖော်ပြထား, သဘောသဘာဝ, ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်ပစ္စည်းများအပေါ်သက်ရောက်မှုများ။
သင့်ရဲ့ Website တွင်ပါဝင်သည် Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းမှအကြောင်းအရာတင်ပြခြင်းအားဖြင့်, သင် Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းလောက-wide, မူပိုင်-အခမဲ့နှင့်တစ်ခုတည်းကိုသာပြသ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အကြောင်းအရာ, မျိုးပွားပြုပြင်မွမ်းမံ, လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်ထုတ်ဝေ Non-သီးသန့်လိုင်စင်ချထားပေးရန် , ဖြန့်ဝေနှင့်သင့်ဘလော့ဂ်ကိုမြှင့်တင်ရန်။ သငျသညျအကြောင်းအရာဖျက်ပစ်လျှင်, ယင်း Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းအဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေဖယ်ရှားပစ်ရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အားထုတ်မှုကိုသုံးပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကအကြောင်းအရာမှယာယီသိမ်းဆည်းသို့မဟုတ်ကိုးကားချက်ချင်းမရရှိနိုင်သေးပါလုပ်မရစေခြင်းငှါဝန်ခံ။
သူတို့အားကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်အာမခံမဆိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းက The Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိ (ဈ) အတွက် Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းရဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အမြင်ထဲမှာချိုးဖောက်ကြောင်း, မည်သည့်အကြောင်းအရာငြင်းဆန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ညာဘက် (သော်လည်းမတာဝန်) ရှိပါတယ် မည်သည့်အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းမူဝါဒကသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်ကန့်ကွက်မည်သည့်လမ်းအတွက်ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ် (ii) အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိရှိမည်သည့်အကြောင်းပြချက်အဆုံးသတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်မှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်မဆိုတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ် entity ဖို့ဝဘ်ဆိုဒ်၏အသုံးပြုခြင်း။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းသည်ယခင်ကပေးဆောင်မည်သည့်ပမာဏ၏တစ်ပြန်အမ်းငွေပေးရန်မတာဝန်ရှိပါလိမ့်မယ်။
တစ်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်, သင် Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းတ-အချိန်နှင့် / သို့မဟုတ်ညွှန်ပြလစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းအခကြေးငွေ (အပိုဆောင်းငွေပေးချေမှုအသုံးအနှုန်းများသည်အခြားဆက်သွယ်ရေးတွင်ထည့်သွင်းစေခြင်းငှါ) ပေးချေရန်သဘောတူသည်။ subscription ငွေပေးချေမှုသင်တစ်ဦး Upgrade များအတွက် sign up ကိုနေ့ခြင်းတွင်တစ်ဦး Pre-လစာအခြေခံပေါ်မှာတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ပြီးညွှန်ပြအဖြစ်လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းကာလအဘို့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှု၏အသုံးပြုမှုကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ငွေပေးချေမှုသည်အမ်းမရှိကြပေ။
သင်တစ်ဦးစာရင်းသွင်းမှုကိုပယ်ဖျက်ချင်သောသက်ဆိုင်သောကြေးပေးသွင်းကာလ၏အဆုံးမီ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကိုအကြောင်းကြားမဟုတ်လျှင်, သင့် subscription ကိုအလိုအလျှောက်ပြည့်ကြလိမ့်မည်နှငျ့သငျထိုကဲ့သို့သောစာရင်းပေးသွင်းခြင်းအတွက်ထို့နောက်-သက်ဆိုင်သောနှစ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းကြေးစုဆောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုရန် (အဖြစ် မည်သည့်ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်အခြားပေးချေမှုယန္တရားကို အသုံးပြု. မဆိုအခွန်) ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစံချိန်အပေါ်ရှိသည်။ upgrades အရေးအသား၌ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းရန်သင့်တောင်းဆိုမှုကိုတင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။
အဖိုးအခ, ငွေပေးချေမှုရမည့်။ တစ်န်ဆောင်မှုများအဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းအားဖြင့်သင် Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းသက်ဆိုင်ရာ setup ကိုအခကြေးငွေနှင့်ထပ်တလဲလဲအခကြေးငွေပေးချေရန်သဘောတူအကောင့်။ သက်ဆိုင်အခကြေးငွေသင့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုထူထောင်ကြသည် နေ့မှစ. နှင့်ထိုကဲ့သို့သောန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်း၏ကြိုတင်မဲအတွက်စတင်ပို့ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကိုသင် (30) ရက်သုံးဆယ်အပျေါမှာကြိုတင်ရေးထားလျက်ရှိ၏အသိပေးစာငွေပေးချေမှုအသုံးအနှုန်းများနှင့်အဖိုးအခကိုပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ န်ဆောင်မှုများအဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းမှအသိပေးစာတိကျမ်းစာ၌လာသည်သုံးဆယ် (30) ရက်အချိန်မရွေးသငျသညျခွငျးအားဖွငျ့ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။
ပံ့ပိုးမှု။ သင်၏ဝန်ဆောင်မှုဦးစားပေးအီးမေးလ်ကိုပံ့ပိုးကူညီမှုမှဝင်ရောက်ခွင့်လည်းပါဝင်သည်လျှင်။ "အီးမေးလ်ထောက်ခံမှု" ဟုအဆိုပါ VIP န်ဆောင်မှုများ၏အသုံးပြုမှုကိုရည်မှတ် (တဦးတည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ရက်အတွင်းတုံ့ပြန်ရန်အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းအားဖြင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အားထုတ်မှုနှင့်အတူ) မည်သည့်အချိန်တွင်အီးမေးလ်ဖြင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုအကူအညီအတွက်တောင်းဆိုမှုများကိုလုပ်နိုင်စွမ်းကိုဆိုလိုသည်။ "ဦးစားပေး" ထောက်ခံမှုစံသို့မဟုတ်အခမဲ့အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုသူများအတွက်ထောက်ခံမှုကျော်ဦးစားပေးယူဆိုလိုသည်။ အားလုံးထောက်ခံကြောင်းအဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းစံန်ဆောင်မှုအလေ့အကျင့်, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်မူဝါဒများနှင့်အညီပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်လာရောက်လည်ပတ်သူများ၏တာဝန်။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းပြန်လည်သုံးသပ်မရှိသေးပေနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်မနိုင်, ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲကိုအပါအဝင်ပစ္စည်းအားလုံးသည်, ဝဘ်ဆိုဒ်မှ posted, ဒါကြောင့်ပစ္စည်းရဲ့အကြောင်းအရာ, အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်သက်ရောက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိမဖြစ်နိုင်ပါ။ ယင်းဝက်ဘ်ဆိုက် operating အသုံးပြုပုံအဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းအဲဒီမှာပစ္စည်းထောက်ခံကြောင်းကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်ဆိုလိုပါဘူးကတိကျမှန်ကန်အသုံးဝင်သောသို့မဟုတ် Non-အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်တို့အားဤသို့သောပစ္စည်းယုံကြည်နေကြောင်း posted, ဒါမှမဟုတ်။ သငျသညျဗိုင်းရပ်စ်, worm, Trojan ဟာမြင်းများနှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အဖျက်အကြောင်းအရာကနေကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာစနစ်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သောအဖြစ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူပြီးတာဝန်ရှိသည်။ အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိ, သတ်ပုံအမှားတွေ, နှင့်အခြားအမှားအယွင်းများ်ထိုးစစ်ကြောင်းအကြောင်းအရာ, မစင်ကြယ်သော, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်ကန့်ကွက်စရာအဖြစ်အကြောင်းအရာင်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလည်းသီးသန့်တည်ရှိမှုသို့မဟုတ်လူသိရှင်ကြားအခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်ကြောင်းပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်အသိဥာဏ်ပညာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်အခွင့်အရေးများအားထိပါး, တတိယပါတီ, ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုဘာသာရပ်ဖြစ်သော၏ဒေါင်းလုတ်ဆွဲ, ကူးယူသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုမဆံ့နိုငျတယျ, ဖော်ပြထားသို့မဟုတ်ထားသော။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းအဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဧည့်သည်များအားဖြင့်အသုံးပြုခြင်းကနေ, ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာရှိ posted အဲဒီဧည့်သည်များအားဖြင့်ဆိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲထဲကနေရရှိလာတဲ့မဆိုထိခိုက်မှုများအတွက်မဆိုတာဝန်မယူပါ။
အကြောင်းအရာအခြား Website များအပေါ် Posted ။ ကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်မလာကြနှင့်ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲကိုအပါအဝင်, ပစ္စည်းအားလုံးပြန်လည်သုံးသပ်ရန်မနိုင်, အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းလင့်များသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကတဆင့်ရရှိနိုင်ပါစေတော်မူသည်နှင့် The Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကိုလင့်ထားသောစာမျက်နှာများ။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းသူတို့အား Non-အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကျော်မဆိုထိန်းချုပ်မှုရှိသည်မဟုတ်, မိမိတို့အကြောင်းအရာများကိုသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုအတွက်တာဝန်မယူပါဘူး။ non-အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာချိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံအဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကိုကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာထောက်ခံသည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ သငျသညျဗိုင်းရပ်စ်, worm, Trojan ဟာမြင်းများနှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အဖျက်အကြောင်းအရာကနေကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာစနစ်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သောအဖြစ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူပြီးတာဝန်ရှိသည်။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကို non-အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကနေရရှိလာတဲ့မဆိုထိခိုက်မှုများအတွက်မဆိုတာဝန်မယူပါ။
မူပိုင်ချိုးဖောက်မှုနှင့် DMCA ပေါ်လစီ။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းက၎င်း၏ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုလေးစားရန်အခြားသူများကိုမေးတယ်ကြောင့်တခြားသူတွေရဲ့ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများလေးစားပါသည်။ သငျသညျကိုယုံပါလျှင်အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းအားဖြင့်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးသို့မဟုတ်ဆက်စပ်ကြောင်းပစ္စည်းသင်၏မူပိုင်ခွင့်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်းသင် Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်အက်ဥပဒေ ( "DMCA") ပေါ်လစီနှင့်အညီအဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းအကြောင်းကြားရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းအဆိုပါချိုးဖောက်ပစ္စည်းကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်ပစ္စည်းအားလုံးကိုလင့်များကို disable ခြင်းဖြင့်လိုအပ်သည့်သို့မဟုတ်သင့်လျော်သောအဖြစ်အပါအဝင်အားလုံးထိုကဲ့သို့သောသတိပေးချက်များ, တုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်လျော်သောအခွအေနအောက်, ဧည့်သည်တို့သည်မူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းသို့မဟုတ်အခြားသူများ၏အခြားဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးတစ်ခုထပ်တလဲလဲချိုးဖောက်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်လျှင်အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးဧည့်သည်ရဲ့ access ကိုရပ်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောရပ်စဲ၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းသည်ယခင်ကအဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းမှပေးဆောင်မည်သည့်ပမာဏ၏တစ်ပြန်အမ်းငွေပေးရန်မတာဝန်ရှိပါလိမ့်မယ်။
ဥာဏ်ပညာဖြင့်တီထွင်ဖန်တီးထားသောအရာ။ ဤသဘောတူညီသင်သည်မည်သည့်ရန် Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းမှ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းသို့မဟုတ်တတိယပါတီဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုလွှဲပြောင်းမပေးတာလဲ, နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုခွင့်ခေါင်းစဉ်နှင့်အကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းကိုသာအဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းနှင့်အတူ (ထိုပါတီများအကြားကဲ့သို့) ဆက်လက်ရှိနေလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းက The Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းသည်အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းလိုဂိုနှင့်အခြားအမှတ်တံဆိပ်, ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ, ဂရပ်ဖစ်နှင့် The Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းနှင့် ဆက်စပ်. များတွင်အသုံးပြုအမှတ်တံဆိပ်ဒါမှမဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်း၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်များမှာ သို့မဟုတ်အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းရဲ့လိုင်စင်ရ။ အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ဆက်စပ်. များတွင်အသုံးပြုသည့်အခြားအမှတ်တံဆိပ်, ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ, ဂရပ်ဖစ်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအခြားတတိယပါတီများ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ မျိုးပွားသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်မဆိုအဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းသို့မဟုတ် Third-party အမှတ်တံဆိပ်သုံးစွဲဖို့သင်တို့သည်နောက်ညာဘက်သို့မဟုတ်လိုင်စင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ထောက်ပံ့ငွေသင်၏အသုံးပြုခြင်း။
ကြော်ငြာ။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းတခုကိုသင်အခမဲ့ကြော်ငြာအကောင့်ဝယ်ယူကြမဟုတ်လျှင်သင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာကြော်ငြာဖော်ပြရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
Attribution ။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းထိုကဲ့သို့သောသင့် Blog footer သို့မဟုတ် toolbar ကိုအတွက် '' အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းမှာဘလော့, 'ဆောင်ပုဒ်စာရေးဆရာနှင့်ဖောင့်ကိုတွက်ချက်အဖြစ်ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုလင့်များဖော်ပြရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
မိတ်ဖက်ကုန်ပစ္စည်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏တဦးတည်းအနေဖြင့်တစ်ဦးမိတ်ဖက်ထုတ်ကုန် (ဥပမာဆောင်ပုဒ်) ကိုသက်ဝင်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ဝန်ဆောင်မှု၏မိတ်ဖက်ရဲ့စည်းကမ်းချက်များကိုသဘောတူသည်။ သငျသညျက de-ကိုသက်ဝင်သည့်မိတ်ဖက်ထုတ်ကုန်များကမည်သည့်အချိန်တွင်ဝန်ဆောင်မှု၏သူတို့ရဲ့အသုံးအနှုန်းများထဲကရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ဒိုမိန်းအမည်များ။ သင်တစ်ဦးသည်ယခင်ကမှတ်ပုံတင် domain name ကိုတစ်ဦး domain name ကိုမှတ်ပုံတင်သုံးပြီးသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအသိအမှတျပွုနှင့် domain name ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုလည်း၎င်းတို့၏အပါအဝင် Assigned အမည်များနှင့်နံပါတ်များအဘို့အင်တာနက်ကိုကော်ပိုရေးရှင်း ( "ICANN") ၏မူဝါဒများ, မှဘာသာရပ်ကြောင်းသဘောတူ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များ.
အပြောင်းအလဲများ။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကဤသဘောတူညီချက်၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်အစားထိုး၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိမှာ, ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဒါဟာအပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်အခါအားလျော်စွာဒီသဘောတူညီချက်စစ်ဆေးသင်၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ ဒီသဘောတူညီချက်မှမဆိုအပြောင်းအလဲများ၏ပို့စ်ကိုအောက်ပါသင့်ရဲ့ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းဒါမှမဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသူများပြောင်းလဲမှုများလက်ခံမှုရှိပါသည်။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကိုလည်းအနာဂတျမှာ, (အသစ်ရေးကိရိယာများနှင့်အရင်းအမြစ်များများလွှတ်ပေးရေးအပါအဝင်) ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်အသစ်သောဝန်ဆောင်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ် features တွေပူဇော်ပမေညျ။ ထိုကဲ့သို့သော features အသစ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဤသဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများဘာသာရပ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်။
ရပ်စဲ။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကိုချက်ချင်းကိုအကြောင်းမရှိနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲနှင့်အတူသို့မဟုတ်အသိပေးစာမပါဘဲ, မည်သည့်အချိန်တွင်မထိရောက်သောအားလုံးဒါမှမဟုတ်ဝဘ်ဆိုဒ်မဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရန်သင့်သုံးစွဲနိုင်ရပ်ဆိုင်းလိမ့်မည်။ သင်ဤသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်သင့်အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းအကောင့် (သင်တဦးတည်းရှိပါက) အဆုံးသတ်ခြင်းရန်ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်ရိုးရှင်းစွာဝက်ဘ်ဆိုက် အသုံးပြု. ကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းလိမ့်မည်။ ၎င်းသင်တို့ဆီသို့အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းရဲ့အသိပေးစာကနေရက်ပေါင်း (30) သည်အထက်ပါသို့ရာတွင် အကယ်. သင်သည် paid န်ဆောင်မှုအကောင့်ရှိပါကသင်သည်ရုပျပစ်စညျးဒီသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်သုံးဆယ်အတွင်းထိုကဲ့သို့သောဖောက်ဖျက်ကုသပေးဖို့ပျက်ကွက်လျှင်, ထိုကဲ့သို့အကောင့်သာအဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းအားဖြင့်ရပ်စဲနိုင်ပါသည် ; သည်က The Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုဆင်းအထွေထွေပိတျ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ချက်ချင်းဝက်ဘ်ဆိုက်အဆုံးသတ်ခြင်းနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝအားဖြင့်စဲ, န့်အသတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ပိုင်ဆိုင်မှုပြဌာန်းချက်, အာမခံအကြောင်းသတိပြုစရာများ, လျော်ကြေးများနှင့်တာဝန်ယူမှုများန့်အသတ်များအပါအဝင်ရပ်စဲရှင်သန်ရကြလိမ့်မည်ဤသဘောတူညီအားလုံးပါပြဋ္ဌာန်းချက်များရှင်သန်သင့်သော။
အာမခံ၏ခွင။ အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက် "ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်" ထောက်ပံ့ပေးသည်။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းနှင့်၎င်း၏ပေးသွင်းခြင်းနှင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးဤဥပဒေအမြန်သို့မဟုတ်အဓိပ်ပာဆိုမျိုးလုံးကိုအာမခံ, န့်အသတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အပါအဝင်ကုန်သည်တို့သည်အာမခံ, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် Non-ချိုးဖောက်မှုများအတွက်ကြံ့ခိုင်ရေး Disclaimer ။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းမဟုတ်သလိုယင်း၏ပေးသွင်းခြင်းနှင့်လိုင်စင်ခွင့်ပြုမဝက်ဘ်ဆိုက်အမှားအခမဲ့သို့မဟုတ်ကြောင့်လက်လှမ်းရမညျဖွစျလိမျ့မညျမဆိုအာမခံစဉ်ဆက်မပြတ်သို့မဟုတ်မပြတ်မတောက်ပါလိမ့်မည်စေသည်။ သင်အနေဖြင့် download လုပ်ပါနားလည်, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သမ္မာသတိနှင့်အန္တရာယ်မှာဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများရရှိရန်။
တာဝန်ဝတ္တရားများကန့်သတ်။ အဘယ်သူမျှမဖြစ်ရပ်အတွက် Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်း, သို့မဟုတ်၎င်း၏ပေးသွင်းသို့မဟုတ်လိုင်စင်ရ, အဘို့မဆိုစာချုပ်, ပေါ့ဆမှု, တင်းကြပ်တာဝန်ယူမှုသို့မဟုတ်အခြားဥပဒေရေးရာသို့မဟုတ်သာတူညီမျှသီအိုရီအောက်မှာဒီသဘောတူညီချက်မဆိုဘာသာရပ်ကိစ္စမှလေးစားမှုနှင့်အတူထိုက်ပါလိမ့်မည်: (ဈ) မဆို, အထူးဖွစျပှားသို့မဟုတ် လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု; (ii) အစားထိုးကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဝယ်ယူရေး၏ကုန်ကျစရိတ်; (iii) အချက်အလက်များ၏အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်အရှုံးသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများပြတ်တောက်သည် ဖြစ်. , သို့မဟုတ် (ဃ) ကြိုတင်အရေးယူမှုများ၏အကြောင်းရင်းမှတကျိပ်နှစ်ပါး (12) လကာလအတွင်းဒီသဘောတူညီချက်အရဒီ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းရန်သင့်အားဖြင့်ပေးဆောင်သည့်အဖိုးအခထက်ကျော်လွန်ကြောင်းမည်သည့်ပမာဏသာဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုခုပျက်ကွက်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ထိန်းချုပ်မှုကျော်လွန်ကိစ္စရပ်များကြောင့်နှောင့်နှေးမတာဝန်ယူမှုရှိရလိမ့်မည်။ အဆိုပါအထက်ပါသက်ဆိုင်သောဥပဒေဖြင့်တားမြစ်ထားသောအတိုင်းအတာလျှောက်ထားရမည်မဟုတ်။
အထွေထွေကိုယ်စားပြုမှုနှင့်အာမခံ။ သင်, ကိုယ်စားပြု (ဈ) ကိုကျဘျဆိုကျသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကဒီသဘောတူညီချက်နှင့်အတူနှင့်သင့်တိုင်းပြည်အတွက်မည်သည့်ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်း limitation မရှိဘဲအပါအဝင်အားလုံးတည်ဆဲဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများ (နှင့်တကွ, အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီနှင့်အတူတင်းကျပ်သောအညီဖြစ်ရလိမ့်မည်အကြောင်းခိုင်လုံ ပြည်နယ်, မြို့, သို့မဟုတ်အခြားအစိုးရမဟုတ်သောဧရိယာ, အွန်လိုင်းအမူအကျင့်များနှင့်လက်ခံနိုင်ဖွယ်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့မဟုတ်သင်နေထိုင်ရသောတိုင်းပြည်ကနေ export နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ဂီယာနှင့် ပတ်သက်. အားလုံးသက်ဆိုင်သောဥပဒေများအပါအဝင်) နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အလိုတော်၏ (ii) သင့်ကိုအသုံးပြုခြင်း မည်သည့်တတိယပါတီများ၏ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများချိုးဖောက်သို့မဟုတ် misappropriate မဟုတ်ပါဘူး။
Indemnification ။ သငျသညျသငျ့ကိုအသုံးပြုခြင်းထဲကပေါ်ထွက်လာသော, ရှေ့နေများ '' အဖိုးအခများအပါအဝင်မည်သည့်လူအပေါင်းတို့တောင်းဆိုမှုများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များမှနှင့်ဆန့်ကျင်အန္တရာယ်ကင်းအဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်း၎င်း၏ကန်ထရိုက်တာများနှင့်၎င်း၏လိုင်စင်ရ, မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာများ, အရာရှိများ, န်ထမ်းများနှင့်အေးဂျင့် indemnify နှင့်ကျင်းပရန်သဘောတူ ဒီသဘောတူညီချက်၏သင့်ကိုချိုးဖောက်ရန်ကန့်သတ်ထားအပါအဝင်ဒါပေမယ့်မကျဘျဆိုကျ။
အထွေထွေ။ ဤသဘောတူညီအဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းအကြားတစ်ခုလုံးကိုသဘောတူညီချက်ဥပဒေနှင့်အသငျသညျ hereof အကြောင်းအရာကိစ္စအမှုမှာ, သူတို့သာအဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်း၏အခွင့်ရအလုပ်အမှုဆောင်ကလက်မှတ်ရေးထိုးရေးသားထားသောပြင်ဆင်ရေးအသုံးပြုပုံဒါမှမဟုတ်ပို့စ်အားဖြင့်များ၏ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းအားဖြင့်ပြုပြင်ထားသောစေခြင်းငှါ တစ်ဦးပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဗားရှင်း။ , မဟုတ်ရင်ထောက်ပံ့ရှိလျှင်အတိုင်းအတာသက်ဆိုင်သောဥပဒေ မှလွဲ. , ဤသဘောတူညီချက်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်မဆိုဝင်ရောက်ခွင့်သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုက၎င်း၏ဥပဒပြဌာန်းချက်၏ပဋိပက္ခနှင့်မဆိုများအတွက်သင့်လျော်သောနေရာဖယ်ထုတ်ပြီး, အ Provincia က de San Jose ၏ဥပဒေများဖြင့်အုပ်ချုပ်ပါလိမ့်မည် အငြင်းပွားမှုများထဲကပေါ်ထွက်လာသောသို့မဟုတ်တူညီသောမဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း San Jose, San Jose တည်ရှိသောပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးများဖြစ်လိမ့်မည်။ (ကနှောင်ကြိုးများတင်ခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်အရည်အချင်းတရားရုံးတွင်ယူဆောင်စေခြင်းငှါအရာ) ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်. တရားရုံးမိန့်သို့မဟုတ်သာတူညီမျှကယ်ဆယ်ရေးသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုများအဘို့အတောင်းဆိုမှုများ မှလွဲ. , ဒီသဘောတူညီချက်အောက်မှာပေါ်ပေါက်မည်သည့်အငြင်းပွားမှုနောက်ဆုံးတွင်၏ဘက်စုံအနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများနှင့်အညီအခြေချခံရကြလိမ့်မည် ထိုကဲ့သို့သောစည်းကမ်းများနှင့်အညီခန့်အပ်ထားသောသုံးခုံသမာဓိလူကြီးများကတရားစီရင်ရေးအနုညာတစီရင်ခြင်းနှင့်ဖြန်ဖြေခြင်းဝန်ဆောင်မှု, Inc ( "ကြောပိတ်ဆို့မှု") ။ အဆိုပါခုံသမာဓိအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာ, San Jose နေရာယူကြမည်နှင့်ခုံသမာဓိဆုံးဖြတ်ချက်မဆိုတရားရုံးထဲမှာပြဌာန်းနိုင်ပါသည်။ ဒီသဘောတူညီချက်ပြဋ္ဌာန်းရန်မဆိုအရေးယူသို့မဟုတ်ရှေ့ဆက်အတွက်ရေပန်းစားနေသောပါတီစရိတ်နှင့်ရှေ့နေများ '' အဖိုးအခခွင့်ရလိမ့်မည်။ ဒီသဘောတူညီချက်မဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမမှန်ကန်ပါသို့မဟုတ်မပြုနိုင်ကျင်းပလျှင်, ထိုအစိတ်အပိုင်းပါတီများ '' မူလရည်ရွယ်ချက်ရောင်ပြန်ဟပ်မှဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်ကျန်ရှိသောဝေမျှပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု၌တည်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒီသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်တို့ကိုမဆိုချိုးဖောက်မဆိုသက်တမ်းသို့မဟုတ်အခြေအနေတစ်ခုခုပါတီတစ်ဦးကစွန့်လွှတ်, တစုံတယောက်သောသူသည်ဥပမာအားဖြင့်ခုနှစ်, ထိုကဲ့သို့သောသက်တမ်းသို့မဟုတ်အခြေအနေသို့မဟုတ်တို့ကိုမဆိုနောက်ဆက်တွဲဖောက်ဖျက်လည်မည်မဟုတ်။ သငျသညျမှသဘောတူညီမှုမဆိုပါတီရန်ဤသဘောတူညီချက်အောက်မှာသင့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကို assign, နှင့်၎င်း၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများ, အားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူမည် အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းခွအေနအေမရှိဘဲဤသဘောတူညီချက်အောက်မှာက၎င်း၏အခွင့်အရေးကို assign လိမ့်မည်။ ဤသဘောတူညီအပေါ်သို့ binding မည်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါပါတီများ၏အကျိုးအတွက်မှ inure ပါလိမ့်မယ်, သူတို့ရဲ့ဆက်ခံခြင်းနှင့် assign ခွင့်ပြု။
types of saws for woodworking ကပြောပါတယ်
အစစ်အမှန် instagram နောက်လိုက်ဝယ်ဖို့ ကပြောပါတယ်
ငါသည်ဤကြီးမြတ်ဖတ်ဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့လိုအပျ !! ကျနော်ကျိန်းသေခံစား
ဒါကြောင့်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှနည်းနည်း။ ငါသည်သင်တို့ကိုသငျသညျ post အသစ်သောပစ္စည်းပစ္စယထွက်စစ်ဆေးမှတ်သားစာအုပ်ဆိုင်ရှိတယ် ...
မေလလော့ကျွန်းမဲခေါင် khi ကပြောပါတယ်
အလွန်ကောင်းသောရေး-Up ။ ငါဆက်ဆက်ဒီ site ကိုချစ်။
ဂိမ်းကို PC ကပြောပါတယ်
သင်သည်သင်၏ကျွမ်းကြီးထွားခြင်းငှါအလိုရှိခဲ့လျှင်ဒီ site ကိုလာရောက်လည်ပတ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အပူဆုံးနှင့်အတူမွမ်းမံ
Where To Find Joma Jewellery | Free Live Online Training and Courses says: